चलचित्रमा ओरालाे लाग्दै गरेकी रेखालाई अब मालिकाकै भर !::Hamrodamak.com
रेखाकै शब्दमा, उनले यसअघि खेलेका फिल्मभन्दा भिन्न र विशेष छ, मालिका।
काठमाडौं । कुनै समय यस्तो थियो, रेखा थापा जति फिल्म खेल्थिन्, सबै हिट हुन्थे। चारैतिर उनकै हाई–हाई हुन्थ्यो। तर, अहिले एक वर्षमा एउटा फिल्म मात्र खेल्छिन्, तैपनि लगानी नै उठ्दैन। यो खबर आजको नेपाल साप्ताहिकले छापेको छ।
पछिल्लो पटक उनी आफैँले निर्माण गरेको फिल्म रुद्रप्रियाको पनि यस्तै हविगत भयो। त्यति हुँदाहुँदै पनि पर्दामा ‘बोल्ड’ भूमिकामा देखिने यी हिरोइनले हरेश खाएकी छैनन्।
प्रमाण हो, मालिका। १६ कात्तिकबाट प्रदर्शन हुने यस फिल्ममा उनी हिरोइन मात्र होइन, निर्देशक पनि हुन्।
तर, यस्तै महसुस दर्शकले गर्लान्? ताकि उनको असफल यात्रामा ब्रेक लागोस्, आशा गरौँ। तत्र रेखाको अभिनय करिअर अझ ओझेलमा पर्नेमा शंकै छैन।